News under शिक्षा
काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड&ndash;१९) प्रभावित सहरी क्षेत्रका विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बिहान बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्यालय बन्द गरी अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । &lsquo;सहरी क्षेत्रका विद्यालय बन्द गरी अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ ,&rsquo; सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले भने 'विद्यालय...
कोरोना संक्रमण देखिएका विद्यालय एक साता बन्द गर्ने कामनपाको निर्णय
काठमाडौं&ndash; कोरोना संक्रमित हुने विद्यार्थी र शिक्षकको संख्या बढ्न थालेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले संक्रमण देखिएको विद्यालय एक साता बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख स्तरको बिहीबार बसेको बैठकले कोरोना संक्रमित हुने विद्यार्थी र शिक्षकहरुको संख्या बढ्नथाले विद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थी वा कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिए एक हप्ता विद्यालय बन्द गरी...
विद्यार्थी र शिक्षकमा कोरोना देखिएपछि विद्यालय बन्द गर्ने तयारीमा काठमाडौं महानगरपालिका
काठमाडौँ&ndash; विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले विद्यालय बन्दको तयारी गरेको छ । महानगरले आजैबाट लागू हुने गरी विद्यार्थीमा कोरोना देखिएका विद्यालय बन्दको तयारी गरेको हो । काठमाडौँ महानगरपालिकाका शिक्षा अधिकारी रामप्रसाद सुवेदीले केहीबेरमा विद्यालय सञ्चालनबारेको सूचना जारी गर्ने बताए । उनले भने, &lsquo;काठमाडौँका केही विद्यालयमा विद्यार्थी तथा शिक्षकमा कोरोना देखिएको छ ।...
काठमाडौं उपत्यकासहित ठूला शहरमा एक महिना विद्यालय बन्द गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकासहित ठूला शहरका विद्यालय एक महिना बन्द गर्न सिफारिस गरेको छ । यो अवधिमा अनलाइन कक्षामार्फत पठन पाठन गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुझाव छ । अहिले देखिएको कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट युवा र कम उमेर समूहमा देखिएको मन्त्रालयको विश्लेषण छ । यो चेन ब्रेक गर्न...
काठमाडौं &ndash; स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको विद्यालय बन्द गर्ने आग्रहमा सरोकारवालाहरूले असहमति जनाएका छन्। सोमबार मन्त्रालयका पदाधिकारी र सरोकारवालाबीचको छलफलमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले तत्काल विद्यालय बन्द नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएका हुन्। मन्त्रालयले केही दिनअगाडि कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्दै गएको भन्दै विद्यालय बन्द गर्न आग्रह गरेको थियो। आजको छलफलमा सहभागी सरोकारवालाहरूले स्वस्थ्य...
विद्यालय बन्द गर्ने भन्ने विषयमा शिक्षा मन्त्रालय र सरोकारवालाबीच छलफल
काठमाडौं । कोरोना संक्रमणको जोखिममा विद्यालय सञ्चालन गर्ने कि बन्द गर्ने भन्ने विषयमा शिक्षा मन्त्रालय र सरोकारवालाहरुबीच छलफल सुरु भएको छ । महामारीको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै विद्यालय सञ्चालनबारे आवश्यक निर्णयका लागि मन्त्रालयले सरोकारवालालाई बोलाएर छलफल गरेको हो । शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको सचिवालयले मन्त्रालयमा छलफल जारी रहेको जानकारी दिएको छ...
शिक्षण संस्था बन्द गर्ने सीसीएमसीको प्रस्तावमा प्याब्सनको विरोध
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम रहेको भन्दै सरकारले काठमाडौंसहित प्रमुख शहरमा विद्यालय बन्द गर्ने तयारी गरेपछि निजी विद्यालय सञ्चालकले असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रमुख शहरमा तीन सातासम्म विद्यालय बन्द गर्ने र अनलाइनमार्फत पठनपाठन गर्ने विषयमा शनिबार कोभिड&ndash;१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) मा छलफल भएको थियो । यद्यपि यो विषयमा निर्णय...
कोरोना सक्रमित विद्यार्थी फेला पर्न थालेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो-'स्कुल बन्द गरेर अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरौं'
काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्कुल बिदा गरेर अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न शिक्षा मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको छ । यो प्रस्ताव शिक्षा मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार पछिल्लो समयमा फेला परेका संक्रमितमा विद्यार्थी पनि रहेकाले विद्यालय बन्द गरेर अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको छ...
भोलिदेखि शनिवारसम्म सबै शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौं &ndash; शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले उपत्यकामा वायु प्रदूषण बढेको भन्दै शनिबारसम्म सबै शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठका प्रेस सल्लाहकार ईश्वरराज ढकालले मन्त्रालयले उक्त निर्णयबारे प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। अहिले चलिरहेको परीक्षालाई छोडेर बाँकी सबै शैक्षिक कार्य भोलिदेखि शनिबारसम्म बन्द गर्ने निर्णय भएको...
भेनस नेसनल कलेजले ग¥यो 'हार्टेनिंङ मिट'
काठमाडौं&ndash; काठमाडौं उत्तर पूर्वी क्षेत्रको गोकर्णेश्वर नगरपालिका&ndash;८ बेसिगाउँमा रहेको भेनस नेसनल कलेजले हार्टेनिंङ मिट सम्पन्न गरेको छ । शनिबार पिस ब्यांकेट जोरपाटीमा भएको हार्टेनिंङ मिटमा भेनस नेसनल कलेजमा नयाँ भर्ना भएका बिद्यार्थीहरुलाई स्वागत तथा पास आउट बिद्यार्थीहरुको बिदाइ गरिएको हो । कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिमा पूर्व उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको उपस्थिती रहेको थियो । त्यस्तै...
चितवनमा विद्यार्थीले शिक्षकलाई दले कालोमोसो
चितवन &ndash; चितवनको नारायणगढस्थित बालकुमारी माध्यामिक विद्यालयका शिक्षक शशीधर गैरेले दुर्व्यवहार गरेको भन्दै कक्षा ११ र १२ विद्यार्थीहरुले कालोमोसो दलेका छन् । गैरेले छात्राहरुलाई पटकपटक दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै बुधबार विद्यालय परिसरमा नै कालोमोसो दलेका थिए । विद्यार्थीहरुले विद्यालय व्यवस्थापन, शिक्षकसहितको बैठकमा माफी माग्न भन्दा पनि नमानेपछि गैरेको कर्तुत बाहिर ल्याउनको लागि...
कक्षा १२ को परीक्षा तालिका सार्वजनिक,परीक्षा आगामी जेठ २६ गतेदेखि
काठमाडौं &ndash; राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरेको छ । परीक्षा आगामी जेठ २६ गतेदेखि सुरु हुने छ । तालिकाअनुसार पहिलो दिन अनिवार्य अँग्रेजी विषयको परीक्षा हुने छ । जेठ २७ गते ऐच्छिक नेपाली, भूगोल, कम्प्युटर साइन्सलगायतका विषयको परीक्षा हुने छ । फिजिक्स, पोलिटिकल साइन्स, होम साइन्स, होटल म्यानेजमेन्टलगायतका...
एसईई जेठ १३ गतेदेखि संचालन हुने
काठमाडौं &ndash; २०७७ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) परीक्षा आगामी जेठ १३ गतेदेखि सन्चालन हुने भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बैठकले जेठ १३ गतेदेखि २४ गतेसम्म परीक्षा सन्चालन गर्ने निर्णय गरेको बोर्ड सदस्य सचिव दुर्गाप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । आगामी एसईई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै लिने छ । गत २६ माघमा...
काठमाडौं &ndash; शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शिक्षकहरूको जिल्लान्तर सरूवा हुन मिल्ने बाटो खुला गरिदिएको छ। गत पुस २० गतेदेखि जिल्लान्तर सरूवा रोक्का थियो। केन्द्रका सूचना अधिकारी माधवप्रसाद दाहालका अनुसार विभिन्न शर्तहरूको अधिनमा रहेर शिक्षक सरूवा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो। जिल्लान्तर सरूवा हुने स्थानीय तह तथा जिल्लाभित्रकै एक स्थानीय तहबाट अर्को...
काठमाडाैँ । वैज्ञानिक शब्द सुन्न साथ हाम्राे मष्तिस्कमा अाउने पहिलाे नाम हाे , अल्वर्ट आइन्स्टाइन । विज्ञान जगतका एक दरिला स्तम्भ उनी भाैतिकवादी वैज्ञानिक हुन् । उनी सबैभन्दा बढी सापेक्षताको सिद्धान्त र द्रव्यमान(ऊर्जा समीकरण)का स्तम्भको रुपमा चिनिन्छन् । उनलाई सैद्धान्तिक भौतिकी, खास गरी प्रकाश प्रभावको खोजको लागि १९२१ मा नोबेल पुरस्कार...
असारबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय
काठमाडौं &ndash; कोरोना भाइरस (कोभिड&ndash;१९) महामारीका कारण प्रभावित भएको यो वर्षको शैक्षिक सत्र जेठमा सकिने भएको छ । संशोधित नियमावली अनुसार यो वर्षको शैक्षिक सत्र जेठमा सक्ने र असार १ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने निर्णय भएको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले जानकारी दिए । उनले भने, &lsquo;संशोधित शिक्षा नियमावलीलाई आधार...
काठमाडौं&ndash; कक्षा १२ को परीक्षामा टिकटक बनाएर सामाजिक सञ्जालमा राख्ने एक जना विद्यार्थीको परीक्षा रद्द भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले दैलेखको कालीका माविबाट परीक्षा दिएका रोशनकुमार शाहीको परीक्षा रद्द गरिएको जनाएको छ। गएको मंसिरमा भएको परीक्षामा उनले परीक्षा दिएकै बेला टिकटक बनाएकाले उनको चालु खण्डको परीक्षा रद्द गरिएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले...
काठमाडौं &ndash; सरकारले देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा &lsquo;जंक फुड&rsquo; अर्थात् पत्रु खाना खुवाउन निषेध गरेको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमीले प्रकाशन गरी सोमबार सार्वजनिक गरेको &lsquo;विद्यालय दिवाखाजा व्यवस्थापन सहयोगी पुस्तिका&rsquo; मा सामुदायिक विद्यालयका प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई दिवाखाजामा &lsquo;जंक फुड&rsquo; खुवाउन निषेध गरिएको छ...
बिजय शाहीको चर्चा : १३ बिद्यार्थीलाई सिकाए फर्मुला (भिडियोसहित)
काठमाडौ&ndash; मेमोरी किङ विधामा विश्व रेकर्ड कायम गरेका कालीकोटका विजय शाहीले निकै चर्चामा आएका छन्। शाहीलाई विश्व रेकर्ड कायम गरेपछि उनि आफ्नो दिमागले कति प्रतिशत काम गरेको छ भनेर जाच्नको लागि नासा जादै छन् भन्ने खबर पनि बाहिर आएको थियो। बिजय शाहीले चाइनिज भाषामा पनि आफ्नो क्षमता देखाउदा जो कोहि नै अचम्म...
काठमाडौं &ndash; राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को नतिजा सोमबार बिहान सार्वजनिक गरेको छ। यसअघि आइतबार बसेको बोर्ड बैठकले सोमबार बिहान नतिजा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रकाशित नतिजा अनुसार १ जनाको रद्द भएको छ भने ११ हजार ४ सय ९० जनाको स्थगित भएको छ। कुल ४ लाख ३३ हजार २...
कक्षा १२ को नतिजा : ३० पूर्णाङ्कको परीक्षामा ६० नम्बर भेटिएपछि..
काठमाडौँ &ndash; शिक्षकले जथाभावी प्राप्तांक पठाउँदा कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ भएको छ । कार्यविधिमा तोकिएको सिस्टममा परीक्षा केन्द्रहरूबाट नम्बर नआउँदा लक्ष्यअनुसार नतिजा सार्वजनिक गर्न नसकिएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ । गत मंसिर १६ गते कक्षा १२ को संक्षिप्त परीक्षा सकिएको थियो । &lsquo;परीक्षा सकिएको महिना दिनमा नतिजा प्रकाशन गर्न सक्छौं जस्तो...
कक्षा १२काे परीक्षाा फल यही साता भित्र प्रकाशन हुने
काठमाडौँ । गत मंशिरमा समपन्न कक्षा १२ को परिक्षाको नतिजा यसै साता सार्वजनिक हुने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ । नतिजा प्रकाशन पुसको अन्तिम साता गर्ने भनिए पनि परीक्षाको शैलीमा केही परिवर्तन आएकाले नतिजाको तयारीमा समय लागेको बोर्डका प्रवक्ता जङ्गबहादुर अर्यालले बताए । कक्षा १२ को परीक्षा मंसिर ९ गतेदेखि १६...
काठमाडौं उपत्यकाका अधिकाशं विद्यालय आजदेखि खुल्दै
&nbsp;काठमाडौं &ndash; काठमाडौं उपत्यकाका धेरैजसो विद्यालयमा आजदेखि भौतिक रुपमै उपस्थित भएर पढाइ सुरु हुने भएको छ । कोरोनाको जोखिम कम भएको भन्दै नगरपालिकाहरुले विद्यालय खोल्न अनुमति दिएसँगै विद्यालयहरुले विद्यार्थीलाई भौतिक रुपमै उपस्थित गराएर पढाइ सुरु गर्न लागेका हुन् । ललितपुर जिल्लाका धेरै पालिकाले आजदेखि विद्यालय सञ्चालन गर्ने भएका छन् । ललितपुर...
आजदेखि सुरु हुने इक्यान एजुकेसन मेला भर्चुअल माध्यमबाट
काठमाडौँ &mdash; इक्यान शैक्षिक मेलाको १४ औं संस्करण आजदेखि सुरु हुँदै छ । कोभिड&ndash;१९ को महामारीका कारण नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले यसपटक भर्चुअल एजुकेसन मेला आयोजना गरेको हो । सोमबार सकिने चारदिने मेलामा करिब एक लाख विद्यार्थी र अभिभावकले सहभागिता जनाउने आयोजकको अपेक्षा छ । मेला सुरु हुनुअघि नै करिब ३० हजार...
माघ १० गतेभित्र कक्षा १२ को परिक्षाफल प्रकाशन गर्ने तयारीमा बोर्ड
काठमाडौँ ।गत मंशिरमा सम्पन्न कक्षा १२ को नतिजा यही माघ १० गतेभित्रै प्रकाशन हुने भएको छ । अहिलेसम्म तथ्याङ्क प्रवृष्टि (डाटा इन्ट्री) गर्ने काम सकिएको र रुजु गर्ने काम भइरहेको राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलले बताउनु भएको छ । ४० प्रतिशतको नतिजा रुजु भइसकेको र ६० प्रतिशतको काम यसै...
शैक्षिक सत्रको अन्त्य सारियो , एसईइ कहिले ?
काठमाडौँ । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण पठन पाठन प्रभावित हुदाँ यस वर्ष शैक्षिक सत्रको अन्त्य जेठका लागि सारिएको छ । चैत्रमा सकिने पाठ्यक्रम महामारीको प्रभावलाई मध्यनजर गर्र्र्दै जेठमा सार्न शिक्षा मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डले जनाएको छ । काहीँकाहीँ अनलाइनबाट परिक्षा भएपनि धेरै ठाउमा पठनपाठन पुरै ठप्प भएकोले...
प्रज्ञाको भानुभक्त कक्षमा साताव्यापी पुस्तक मेला, ४० प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था
काठमाडौँ । प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पुस्तक प्रदर्शनी आयोजना गरेको छ । २९९ औं पृथ्वी जयन्तीका अवसर पारेर कमलादीस्थित प्रज्ञाको भानुभक्त कक्षमा पुस्तक मेला भइरहेको हो । साताव्यापी मेलामा विभिन्न स्थानहरूबाट पुस्तकप्रेमीहरू सहभागी भइरहेका छन् । अध्ययनशिलतालाई अझ बढाउने पुस्तक मेलाको मुख्य उद्धेश्य हो। पठन संस्कृतिको विकास, बिक्री, प्रवद्र्धन, लेखक, पाठक र प्रकाशकबीच...
कक्षा ११ र १२ नयाँ पाठ्यक्रमविरुद्ध दर्ता भएको रिट खारेज
काठमाडौँ । कक्षा ११ र १२ को नयाँ पाठ्यक्रम सम्बन्धि अन्योलता समाधान भएको छ । नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगर्न भन्दै दायर भएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएसँगै अन्योललता समाप्त भएको हो । नयाँ पाठ्यक्रमविरुद्ध भगवता अर्यालसमेतले गएको असोज २८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ...
एमयूमा प्रहरी र विद्यार्थीबीच झडप : तीन विद्यार्थी घाइते
सुर्खेत &ndash; मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय (एमयू) अहिले तनावग्रस्त बनेको छ । प्रहरी र विद्यार्थीबीच झडप हुँदा तीन जना विद्यार्थी घाइते भएपछि नेविसंघले विभिन्न मागसहित आन्दोलन गरिरहेको छ । परीक्षाका विषयमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति नन्दबहादुर सिंह र विद्यार्थी प्रतिनिधिबीचको छलफलका क्रममा विवाद हुँदा आईतबार साँंझ स्थिति तनावग्रूत बनेको थियो । स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले...
शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षमा मधुप्रसाद रेग्मी सिफारिस
काठमाडौं &ndash; शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ । अध्यक्षमा पूर्व शिक्षासचिव मधुप्रसाद रेग्मी (काठमाडौं) सिफारिसमा परेका छन् । यसैगरी सदस्यहरुमा डिल्लीराम रिमाल (काठमाडौं) र मावि शिक्षकबाट सेवानिवृत्त नन्दकुमारी महर्जन (काठमाडौं) सिफारिसमा परेको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले बतायो । यसअघि सरकारले लोक सेवाका अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनाली...
अब एलएलबी पढ्न प्रवेश परीक्षा उत्तिर्ण गर्नुपर्ने,सिट संख्या ६ सय मात्रै( सुचनासहित)
काठमाडौं &ndash; नेपाल ल क्याम्पस प्रदर्शनीमार्ग काठमाडौंमा एलएलबी पहिलो वर्षमा पढ्न प्रवेश परीक्षा उत्तिर्ण गर्नुपर्ने भएको छ। क्याम्पसले एक सूचना निकालेर प्रवेश परीक्षा फारम भरिसकेका विद्यार्थीको प्रवेश परीक्षाको कार्यतालिका निकालेको छ। जसअनुसार माघ १७ गते शनिबार दिउँसो १ बजेदेखि ४ बजेसम्म प्रवेश परीक्षा हुने क्याम्पसले जनाएको छ। परीक्षा केन्द्र पनि तोकिसकिएको छ। नेपाल ल...
केयूको उपकुलपतिका लागि दरखास्त आह्वान,व्यक्तिगत विवरण मन्त्रीको निजी इमेलमा दिनुपर्ने!
काठमाडौं &ndash; काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका लागि इच्छुकहरूलाई दरखास्त आह्वान भएको छ। कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौं विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्तिका लागि हालै &lsquo;सर्च कमिटी&rsquo; बनाएका थिए। सहउपकुलपतिसमेत रहेका शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सर्च कमिटी बनेको छ। उक्त कमिटीले उपकुलपति नियुक्तिका लागि व्यक्तिगत विवरण मन्त्रीको निजी इमेलमा पठाउन सूचना निकालेको...
सशस्त्र प्रहरीको लिखित परीक्षा दिँदै गरेका १० नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ
काठमाडौं &ndash; अर्काको नाममा परीक्षा दिँदै गरेका १० जना नक्कली परीक्षार्थीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।सशस्त्र प्रहरी बलमा रिक्त रहेको सशस्त्र प्रहरी जवान पदको खुल्ला प्रतियोगिताको लिखित परीक्षामा अर्काको नाममा परीक्षा दिँदै गरेका १० जनालाई प्रहरीले शनिबार पक्राउ गरेको हो। हालै प्रकाशित विज्ञापनअनुसार खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गरिने साधारण समूह र साधारण...
कोरियाली भाषा परीक्षाको टुङ्गो लागेन, हजारौं युवा-युवती अलमलमा
काठमाडौँ । कोरियाली भाषा परीक्षा सञ्चालन हुने टुङ्गो नलाग्दा परीक्षाको तयारीमा जुटेका युवा अलमलमा परेका छन् । परीक्षा कहिले गर्ने भन्ने टुङ्गो नलाग्दा परीक्षाको तयारी गरेका युवामा भने निराशा छाएको छ । कोरियाले प्रत्येक वर्ष भाषा परीक्षा उत्तीर्ण हुने नेपाली युवालाई त्यहाँ रोजगारीको अवसर प्रदान गर्दै आएको छ । कोरियाले अझै...
कक्षा १२: परिक्षा दिन छुटेका विद्यार्थीका लागि नयाँ तालिका सार्वजनिक
काठमाडौँ ।राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डले कोरोनाको कारण कक्षा १२ को परीक्षा दिन छुटेका विद्यार्थीले आउँदो १६ गतेदेखि परीक्षा दिन पाउने गरि परिक्षा तालिका सार्वजनिक गरेको छ । &nbsp;बोर्डले कोरोनाको कारण यसअघि परीक्षा दिन नपाएका विद्यार्थीलाई फेरि परीक्षा दिन पाउने गरी तालिका सार्वजनिक गरेको हो । पुस १६ गतेदेखि सम्बन्धित विद्यालयमै मौका परीक्षा...
गोकर्णेश्वर नयाँवस्तीस्थित पिस नेपाल एकेडेमीका शिक्षकले कुटे विद्यार्थी
काठमाडौं &ndash; बाल अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धी १९८९ र बालबालिक सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०६८ सम्म आईपुग्दा नीतिगत रुपमा नेपाल बालमैत्री राष्ट्र भई सक्नु पर्ने थियो तर शिक्षासँगै संस्कार र चेतनाको कारण अझै कयौँ विद्यालयले बालबालिकालाई शारिरिक, मानसिक यातना दिएर विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन् । विद्यार्थीलाई शिक्षा र संस्कार दिनु...
लोकसेवाले लिएको परिक्षामा आठ नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ
सुर्खेत &ndash; जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले अर्काको नाममा परीक्षा दिने आठ नक्कली परीक्षार्थीलाई पक्राउ गरेको छ। लोकसेवा आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा प्राविधिक जवान सङ्गीततर्फको परीक्षामा अर्काको परीक्षा दिँदै गरेका आठ जनालाई बुधबार प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा भगवतीमाई गाउँपालिका&ndash;७ दैलेख निवासी कमल विकको स्थानमा परीक्षा दिने सोही गाउँपालिकामा बस्ने २३ वर्षीय तिलक...
त्रिविका आंशिक प्राध्यापकहरुले कक्षा र परीक्षा बहिस्कार गर्ने घोषणा
काठमाडौं &ndash; त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापकहरुले विश्वविद्यालयको कक्षा र परीक्षा बहिस्कार गर्ने घोषणा गरेको छ । समान कामको समान ज्याला हुनुपर्नेलगायतका माग राखेर आन्दोलनरत आंशिक प्राध्यापकले त्रिविले विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा सञ्चालन गर्न लागेको कक्षा बहिस्कार गर्ने र परीक्षामा सहभागी नहुने बताएको हो । त्रिवि आंशिक प्राध्यापक संघ केन्द्रीय कमिटिले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन...
कक्षा १–१० सम्मका विद्यार्थीका लागि ‘इ–क्लास नेपाल’ एप सार्वजनिक
काठमाडौं &ndash; कक्षा १ देखि १० सम्मका विद्यार्थीका लागि &lsquo;इ&ndash;क्लास नेपाल&rsquo; एप आएको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले निर्माण गरेको एप शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मंगलबार सार्वजनिक गरेका हुन् । नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड १९) महामारीका बेला घरमै बसेर सुरक्षित तरिकाले सिकाइलाई निरन्तरता दिने उद्धेश्यले...
काठमाडौं । संघीय संरचना अनुसार समग्र शिक्षा नीति तय गर्न गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अध्यक्ष रहेका २५ सदस्यीय आयोगका बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा शुक्रबार दरबार हाइस्किुलमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । सरकारले एक वर्ष नौँ महिनासम्म पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेपछि बाध्य भएर...
काठमाडौं | त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तर (एमए) को अन्तिम परीक्षा अब दुई घण्टाको मात्र लिने भएको छ । नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण कायम रहेसम्म स्नातकोत्तर तहमा समय घटाउने निर्णय विश्वविद्यालयले गरेको हो । स्नातकोत्तर तहमा चार घण्टाको परीक्षा लिने झण्डै चार दशक लामो अभ्यासलाई परिवर्तन गर्दै विश्वविद्यालयले परीक्षालाई अब दुई घण्टामा...
काठमाडौँ &ndash; त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले विभिन्न अध्ययन संस्थान र सङ्कायका लागि लिएको उपप्राध्यापक पदको परीक्षा सम्बन्धी विवाद अदालतमा पुगेको छ । नतिजाप्रति असन्तुष्ट २६ जना उम्मेदवारले उत्प्रेषणको आदेशबाट गत कात्तिक २६ गते आयोगले प्रकाशन गरेको नतिजा खारेजीको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका हुन् । समस्या समाधानका लागि आयोगलाई पटक&ndash;पटक गरिएको...
लोक सेवाले लिएको नेपाली सेनाको लिखित परीक्षा दिने नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ
धनगढी &ndash; कञ्चनपुरमा एक नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले लोक सेवा आयोगले लिँदै गरेको नेपाली सेनाको सैन्य दर्जाको परीक्षामा अर्कै व्यक्तिको नाममा परीक्षा दिइरहेका एक व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा रहेको कञ्चन विद्या मन्दिर परीक्षा केन्द्रमा अर्कै व्यक्तिको नाममा परीक्षा दिइरहेको आरोपमा...
कोरोना जोखिम कायमै : काठमाडौंका विद्यालय तत्काल नखुल्ने
काठमाडौं &ndash; काठमाडौं महानगरपालिकाले कोरोना कहरको अहिलेकै समयमा विद्यालय सञ्चालन गर्न नसकिने जनाएको छ। पहिलेको तुलनामा कोरोना संक्रमण दर कम भए पनि जोखिम कायमै रहेको भन्दै महानगरले तत्काल विद्यालय सञ्चालन गर्न नसकिने र अझै केही समय वैकल्पिक माध्ययमबाट नै पठनपाठन हुने जनाएको हो। गत कात्तिक २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही कार्यविधि...
कोरोनाविरुद्धको खोप नआउँदासम्म दिल्लीका सबै विद्यालय बन्द रहने
नयाँ दिल्ली &ndash; भारतको केन्द्रीय राजधानी रहेको दिल्ली प्रदेशमा कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप नआउदासम्म विद्यालय बन्द नै रहने भएका छन्। खोप नआउदासम्म बालबालिकाहरू विद्यालयमा सुरक्षित हुन नसक्ने भएकाले अहिले नै विद्यालयहरू खोल्न ठिक नहुने निश्कर्ष प्रदेश सरकारले निकालेको हो। दिल्ली प्रदेशका उप मुख्यमन्त्री तथा शिक्षा मन्त्री मनिष सिसोडियाले बुधबार भने, जहिलेसम्म खोप आउँदैन...
काठमाडौं &ndash; कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण गत वैशाखमा हुन नसकेको कक्षा १२ को परीक्षा आजबाट सुरु भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले देशभरका ४ लाख ३२ हजार ५ सय विद्यार्थीहरुको परीक्षा भौतिक उपस्थितिमै लिन लागेको हो । बिहान ८ बजेबाट सुरु परीक्षा साढे एक घण्टाको हुने छ । बोर्डले यस पटक...
अब सरकारी कर्मचारीले लोक सेवालगायतका तयारी कक्षा पढाउन नपाउने
काठमाडौं &ndash; सचिव, सहसचिवलगायत कर्मचारीले लोक सेवालगायतका तयारी कक्षा &lsquo;ट्युसन&rsquo; पढाएपछि सरकारले कडा नियम लागू गरेको छ। कर्मचारीले सेवा प्रवाह ध्यान नदिई निजी इन्स्टिच्युटले चलाउने लोक सेवालगायतका तयारी कक्षामा लिखित वा मौखिक रूपमा प्रशिक्षणका लागि समय दिने गरेको पाइएको थियो। सहसचिवभन्दा माथिका निजामति कर्मचारीले अब त्यस्ता तयारी कक्षामा प्रशिक्षण दिनुपर्ने भए मन्त्रिपरिषदबाट...
८ महिनादेखी बन्द रहेका बडीमालिकाका सबै विद्यालयमा पढाइ सुरु
मार्तडी&ndash; बाजुराको बडीमालिका नगरपालिकाका सबै विद्यालय आइतबारदेखि खुलेसँगै पढाइ सुरु भएको छ। कोभिड&ndash;१९ सङ्क्रमणका कारण विगत आठ महिनादेखि बन्द रहेका नगरपालिकाका सम्पूर्ण विद्यालय आइतबारदेखि खुलेका हुन्। नगरपालिकाको शिक्षा समिति तथा यहाँका विद्यालय व्यवस्थापन समिति र नगर शिक्षा समितिको बैठकले कोरोना सङ्क्रमणका कारण लामो समयदेखि बन्द भएका विद्यालयमा अध्ययन अध्यापन सुरु गर्ने...
काठमाडौँ । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) का कारण विगत ८ महिना देखी बन्द रहेका विद्यालय खोल्ने कि बन्द गर्ने भन्ने जिम्मा स्थानीय सरकारले पाएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको &lsquo;विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धि कार्यढाँचा-२०७७&rsquo; मा विद्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने निर्णय स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । विद्यालय बन्द वा...
विद्यालय सञ्चालन गर्न हावा आवत–जावत हुने कक्षाकोठा अनिवार्य
कात्तिक ३०, काठमाडौं । नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड&ndash;१९) महामारीका बेला बन्द रहेका विद्यालय सञ्चालन गर्न पर्याप्त प्रकाश र हावा आवत&ndash;जावत हुने कक्षाकोठा अनिवार्य गरिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले &lsquo;विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा, २०७७&rsquo; मार्फत सम्बन्धीत विद्यालय र स्थानीय तहलाई फर्निचर, शौचालय, पर्याप्त प्रकाश र हावा आवत&ndash;जावत गर्न सक्ने...
काठमाडौं विश्वविद्यालयको धुन पैसा तिरै
काभ्रे । धुलिखेलस्थित काठमाडौं विश्वविद्यालयले यो वर्ष कोभिड&ndash;१९ को कारण &lsquo;भर्चुअल&rsquo; दीक्षान्त समारोहको आयोजना गर्ने भएको छ । समारोहमा भाग लिने विद्यार्थीलाई मंसिर १५ गतेभित्र अनलाइन आवेदन गर्न भनिएको छ । प्रकाशित सूचनामा सोही महिनाको १७ गतेभित्र आवेदन बुझाउने अन्तिम मिति उल्लेख छ । 26th Convocation Notice...
कक्षा १२ को परीक्षा: २५ जिल्लाका लागि प्रश्नपत्र छपाइको काम तिहार अघिनै सकिने
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पूर्णरुपमा इन्टरनेट सेवा चालू नभएका जिल्लाका लागि प्रश्नपत्र छपाइ शुरु गरेको छ । बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद शर्मासहितको टोलीले शुक्रबारबाट प्रश्नपत्र छपाइ शुरु गरेको हो । बोर्डले कर्णाली, सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेशका करिब २५ जिल्लाका लागि प्रश्नपत्र छपाइ शुरु गरेको हो । इन्टरनेटको समस्या भएका जिल्लाका...
अघिल्लो महिना बेलायत अध्ययन गर्न आएका नेपाली विद्यार्थी बिचल्ली परेको समाचार सबै पत्र पत्रिका र अनलाइनमा छपक्कै भएको थियो । नेपालको राइट पाथ करिअर काउन्सिलिङमार्फत २५ लाखसम्म खर्च गरेर आएका करिब तीन दर्जन विद्यार्थी ८ महिनामै रित्तो हात फर्कनुपरेको विषय थियो त्यो । कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक फिलिप डिसीले अनेक आकर्षण देखाएर हडर्सफिल्ड...
नेसनल मेडिकल कलेज असुली धन्दामा लागे पछि विद्यार्थीहरु पिडामा
काठमाडौं, १७ कार्तिक । वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत स्नातकोत्तर (पिजी) अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीबाट गैरकानुनी रूपमा एक लाख रुपैयाँ उठाउन सुरु गरेको छ । स्नातकोत्तर परीक्षाको मौका पारेर कलेजले विद्यार्थीबाट रकम असुली गर्न सुरु गरेको विद्यार्थीले जनाएका छन् । एक लाख रुपैयाँ नतिर्ने विद्यार्थीलाई परीक्षामा बस्न नदिने धम्की दिएको विद्यार्थीले बताएका छन् ।...
काठमाडौं - नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड&ndash;१९) का कारणस्थति कक्षा १२ को परीक्षा मंसिर ९ गतेदेखि सञ्चालन हुने भएको छ । परीक्षा तालिका र कार्यविधि तयार भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. चन्द्रमणी पौडेलले जानकारी दिए ।उनका अनुसार नेपाल सरकारले तोकेको सुरक्षा मापदण्ड र सामाजिक दुरी कायम गरेर परीक्षा सञ्चालन गर्न...
काठमाडौं &ndash;अभिभावकहरूले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) का लागि उठाइएको परीक्षा शुल्क फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड&ndash;१९) कारण सरकारले परीक्षा सञ्चालन नगरेपछि अभिभावकहरूले शुल्क फिर्ता मागेका हुन् । नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी भन्छन्, &lsquo;परीक्षा नै सञ्चालन नभएपछि सबै विद्यार्थीले तिरेको परीक्षा शुल्क फिर्ता गर्नुपर्दछ ।&rsquo; एसईईका...
गोकर्णेश्वरका निजी तथा सामुदायिक विद्यालय असोज १६ देखि खुल्ने,वैशाख,जेठ र असारको शुल्क लिन नपाइने
काठमाडौं - गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले नगरभित्रका निजी तथा सामुदायिक विद्यालय असोज १६ देखि सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । नगरपालिकाले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएको हो । नगरपालिका मेयर सन्तोष चालिसले कक्षा ८ देखि १० सम्मका विद्यार्थीलाई अनिवार्य विद्यालयमै उपस्थित गराई कक्षा सञ्चालन...
काठमाडौं &ndash; शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कोभिड&ndash;१९ को जोखिम कायमै रहेकाले केही समय विद्यालय खोल्नभन्दा वैकल्पिक सिकाइ प्रणालीलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन् । शिक्षा पत्रकार समाजले आयोजना गरेको &lsquo;वैकल्पिक सिकाइको कार्यान्वयनमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका&rsquo; विषयक भर्चुअल छलफलमा मन्त्री पोखरेलले शिक्षालयमा सङ्क्रमण देखिएमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कठिन हुने भएकाले हाललाई...
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको अन्तिम परीक्षा पनि अनलाइनबाटै गर्ने, परीक्षा अवधि ८ घण्टा
सुर्खेत &ndash; मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले व्यवस्थापन र मानविकी संकायको स्नातक र स्नातकोत्तर तहको अन्तिम परीक्षा पनि अनलाइन माध्यमबाटै गर्ने भएको छ । पहिलो चरणमा व्यवस्थापन, मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र, विज्ञान तथा प्रविधि, इन्जिनियरिङ र शिक्षा शास्त्र संकायको स्नातक तहको सातौं सेमेस्टर र स्नातकोत्तर तहको तेस्रो सेमेस्टरको परीक्षा अनलाइन माध्यमबाट गर्न लागिएको परीक्षा...
१३ वर्षीया छोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा ६२ वर्षीय बाबु पक्राउ
दाङ &ndash; छोरीलाई बलात्कार गरेको अभियोगमा दाङमा ६२ वर्षीय बाबु पक्राउ परेका छन्। १३ वर्षीया छोरीलाई बलात्कार गरेको अभियोगमा प्रहरीले बुधबार बाबुलाई पक्राउ गरेको हो। बंगलाचुली गाउँपालिका&ndash;२ मर्पेसका ६२ वर्षीय बाबुलाई १३ वर्षीया छोरीलाई बलात्कार गरेको अभियोगमा पक्राउ गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। पीडित पक्षले उजुरी दिएपछि ६२ वर्षीय अभियुक्तलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला...
आज राष्ट्रिय बाल दिवस : विद्यालयमा टिकाउने चुनौती कायमै
काठमाडौं &ndash; &lsquo;विपदमा बाल अधिकारको सुनिश्चितता, हामी सबैको प्रतिबद्धता&rsquo; भन्ने नाराका साथ यस वर्षको राष्ट्रिय बाल दिवस सोमबार भर्चुअलरुपमा मनाइँदै छ । दिवसका अवसरमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले मूल आयोजक समितिका तर्फबाट सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र अन्य सरोकार पक्षसँग दिवस मनाउने तयारी गरेको छ । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको बाल अधिकारसम्बन्धी...
असोज पहिलो सातासम्ममा विद्यालय र विद्यार्थीलाई निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराईने
काठमाडौं - शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन सहजीकरणका लागि विद्यार्थीलाई इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। &lsquo;विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका&rsquo; हालै जारी गरेको मन्त्रालयले नेपाल टेलिकमलगायत इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाबाट शैक्षिक प्रयोजनका लागि मात्र हुने गरी निःशुल्क वा सहुलियत शुल्कमा डाटा प्याकेज प्राप्त गरी विद्यालय वा विद्यार्थीलाई...
काठमाडौं &ndash;त्रिभुवन विश्वविद्यालयका वार्षिक परीक्षा दसैँ पछाडि हुने भएको छ । कोभिड&ndash;१९ को सङ्क्रमण बढ्न थालेपछि तत्काल वार्षिक परीक्षा सम्भव नभएपछि दशैँ पछाडि नै परीक्षा गर्ने तयारी गरिएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले जानकारी दिए। पनिकाले वार्षिक परीक्षा आफैले सञ्चालन गर्ने र सेमेष्टर परीक्षाको जिम्मा भने सम्बन्धित डिन कार्यालयलाई दिएको...
काठमाडौँ&nbsp; - राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सीटीइभीटी) सँग सम्बन्धन लिएर सञ्चालित स्वास्थ्य विषयका प्राविधिक एसएलसी सरहका कार्यक्रम खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोगको साउन ३० गते बसेको बैठकले चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा ४२ अनुसार प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका सबै कार्यक्रम खारेज गरेको हो ।...
एसईईको नतिजा सार्वजनिक,नतिजा टेलिफोन, एसएमएस र बेभसाइटमा हेर्न सकिने
काठमाडौं &ndash; राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डको सोमबार बसेको बैठकले नतिजा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेलले जानकारी दिए । पौडेलका अनुसार ४ लाख ७२ हजार ७८ विद्यार्थीको परीक्षाफल प्रकाशित भएको हो । नतिजा टेलिफोन, एसएमएस र बेभसाइटमा हेर्न...
अब विद्यालय तहको किताबका ‘कभर’ मा कोरोनाबारे जानकारी
काठमाडौं &ndash; सरकारले कोरोना भाइरसबारे सचेतनाका लागि विद्यालय तहका किताबमा सन्देशमुलक जानकारी राखेको छ। किताबको कभरको भित्रपट्टी कोरोना भाइरसका मुख्य लक्षणहरू, लक्षण देखा परेमा नजिकका तोकिएका स्वास्थ्य केन्द्रमा जानुपर्ने र भाइरसबाट बच्ने उपायबारे जानकारी राखिएका छन्। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले दिएको जानकारीअनुसार कोरोनाबारे सतर्क रहन किताबमै यस्तो जानकारी राखिएको हो। किताबमा राखिएको जानकारीमा...
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई बढीमा ५० प्रतिशत कर्मचारीलाई मात्रै कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । बाँकी कर्मचारीहरूले आलोपालो हुने गरी घरैबाट काम गर्नुपर्ने मन्त्रालयद्वारा बिहीबार जारी परिपत्रमा उल्लेख छ । २६ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई सय भन्दा बढी संक्रमित भएका जिल्लामा बढीमा ५० प्रतिशत...
नेविसंघका कार्यकर्ताले गरे त्रिवि उपकुलपति कार्यालयमा तोडफोड
काठमाडौं &ndash; नेपाल विद्यार्थी संघका कार्यकर्ताले मंगलबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति र रजिस्टारको कार्यालयमा तोडफोड गरेका छन् । मंगलबार परीक्षाको विकल्प देऊ भन्दै नाराबाजी गर्दै पुगेको नेविसंघ कार्यकर्ताले उपकुलपति र रजिस्टारको कार्यालयमा तोडफोड र ढुंगामुढा गरेका हुन् । नेविसंघ त्रिवि समितिका सभापति हरि आचार्यले विज्ञान संकायका विद्यार्थीले तोडफोड गरेका बताए । परीक्षाको विकल्प...
काठमाडौं विश्वविद्यालय १५ दिनका लागि बन्द,पठनपाठन भने अनलाइन मार्फत सञ्चालन हुने
काभ्रे &ndash; कोभिड &ndash;१९ को सङ्क्रमण बढ्दै गएका अवस्थामा पूर्वसावधानी अपनाउन धुलिखेलस्थित काठमाडौंँ विश्वविद्यालयले आजदेखि १५ दिनका लागि बिदा दिएको छ । विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्राडा सुबोध शर्माले सोमबार सूचना जारी गर्दै कोभिड&ndash;१९ को सङ्क्रमण बढ्दै गएका कारण काठमाडौं उपत्यकालगायत काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका धुलिखेल र बनेपा नगरपालिका क्षेत्रमा पनि सङ्क्रमण बढ्ने सम्भावना दृष्टिगत...
भदौ भरी विद्यार्थी भर्ना र परीक्षा सञ्चालन गर्न नमिल्ने सिसिएमसीको प्रस्ताव
काठमाडौं &ndash; कोभिड&ndash;१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी)ले विद्यार्थी भर्ना र परीक्षा सञ्चालन असोज १ बाट गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सिसिएमसीको आइतबार बसेको बैठकले तत्काल विद्यार्थी भर्ना र परीक्षा सञ्चालन गर्न नहुने प्रस्ताव गरेको हो । ५ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्यार्थी भर्ना र परीक्षा सञ्चालन भदौ १ गतेबाट खुल्ला गर्ने निर्णय...
तत्काल पठनपाठन गराउन सम्भव छैन : शिक्षामन्त्री पोखरेल
काठमाडौं &ndash; शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विद्यालयमा विद्यार्थी बोलाएर तत्काल पठपनपाठन गराउन सम्भव नभएको बताएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा उनले &lsquo;फेस टु फेस पठनपाठन&rsquo; तत्काल संभव नरहेको बताएका हुन् । सरकारले फेस टु फेसको विकल्प के के हुन सक्छ भनेर अध्ययन गरिरहेको भन्दै मन्त्री पोखरेलले केही...
अर्को निर्णय नहुँदासम्म कक्षा ११ को परीक्षा नलिन परीक्षा बोर्डको निर्देशन
काठमाडौं &ndash; राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विद्यालयहरूलाई कक्षा ११ को वार्षिक परीक्षा तत्काललाई नलिन निर्देशन दिएको छ । नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड&ndash;१९) का कारण सरकारले परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी निर्णय नगरेको भन्दै उसले यस्तो निर्देशन दिएको हो । &lsquo;कोभिड&ndash; १९ को संक्रमणका कारण नेपाल सरकारले हालसम्म विद्यालय पुनः सञ्चालनको निर्णय गरिनसकेको अवस्थामा समेत...
कक्षा ११ को परीक्षा लिन लागेको भन्दै विरोध प्रदर्शन
बुटवल । कोरोना महामारीको त्रासकै बेला परीक्षा लिन लागेको भन्दै कक्षा ११ का विद्यार्थीले बुटवलमा सरकार र उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान) विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन् । कोरोना महामारीका कारण कक्षा ११ को परीक्षा नलिने भने पनि सरकारले निर्णय परिवर्तन गरी एक्कासी परीक्षा लिने भनेर मानसिक तनाव दिएको भन्दै...
एमबीबीएस तथा बीडीएसको लाइसेन्स परीक्षा भदौ ७ देखी
काठमाडौं&ndash; नेपाल मेडिकल काउन्सिलले एमबीबीएस तथा बीडीएसको दर्ता प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) परीक्षा आगामी भदौमा लिने भएको छ । काउन्सिलले एक विज्ञप्तिमार्फत गत चैत ८ गते लिने भनिएको लाइसेन्स परीक्षा आगामी भदौ ७ गते देखि १० गते सम्म गर्ने जनाएको हो । काउन्सिलका अनुसार बीडीएसको परीक्षा भदौ ७ गते हुनेछ भने एमबीबीएसको परीक्षा रोल...
काठमाडौं&nbsp; - राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को नतिजा प्रकाशनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । आगामी एक हप्ताभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी भईरहेको बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गाप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड&ndash;१९) का कारण एसईई नहुने भएपछि विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्यांकनको आधारमा नतिजा सार्वजनिक गर्न...
सीटीईभीटीको परीक्षा भदौ दोस्रो साता
काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावासायीक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)ले लकडाउनका कारण स्थगित परीक्षा भदौ दोस्रो साताबाट सुरु गर्ने भएको छ । सरकारले निर्धारण गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना र भौतिक दुरी कायम गरेर परीक्षा सञ्चालन गर्न लागिएको सीटीईभीटीद्वारा मंगलबार जारी सूचनामा उल्लेख छ । परीक्षाको विस्तृत तालिका भने केही दिनपछि मात्रै प्रकाशित हुने...
पोखरा विश्वविद्यालयको परीक्षा भदौ अन्तिमदेखि सुरु गर्ने
काठमाडौं - पोखरा विश्वविद्यालयले नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड&ndash;१९) महामारीका कारण स्थगित परीक्षा भदौ अन्तिममा सुरु गर्ने भएको छ । भदौ अन्तिममा सुरु गरेर दशैं अगाडि नै परीक्षा सम्पन्न गरिसक्ने विश्वविद्यालयद्वारा सूचनामा उल्लेख छ । लामो दुरीका गाडीहरू भदौदेखि मात्रै खुल्ने र विद्यार्थीहरू देशका विभिन्न भागमा छरिएर रहेकाले भदौ सुरुमा परीक्षा सञ्चालन...
भदौ १५ देखि विद्यालय तहमा नियमित पठनपाठन
काठमाडौं &ndash; आउँदो भदौ १५ गतेदेखि विद्यालय तहमा पठनपाठन नियमित हुने सम्भावना देखिएको छ । सरकारले जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्ने गरी भदौ १ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना गर्ने बाटो खोलेकाले अब भदौ १५ गतेदेखि विद्यालयमा नियमित पठनपाठन हुने सम्भावना बढेको हो । सामान्यतया सरकारले १५ दिन विद्यार्थी भर्नाका लागि समय...
त्रिविले व्यवस्थापन संकायको परीक्षा भदौदेखि सञ्चालन गर्ने(सुुचनासहित)
काठमाडौं &ndash; त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भदौबाट व्यवस्थापन संकायको परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन भन्दै सरकारले गरेको लकडाउनका कारण विभिन्न संकायका परीक्षा स्थगित गरिएका थिए । व्यवस्थापन संकायको डीन कार्यालयले शुक्रवार एक सूचना जारी गर्दै स्नातकोत्तर तहको परीक्षा भदौ दोस्रो हप्तादेखि हुने जानकारी गराएको हो । यस्तै स्नातक प्रथम,...
कक्षा १२ को परीक्षा गर्ने तयारी
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षा असोजमा गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले १ भदौदेखि परीक्षा सञ्चालन अनुमति दिएसँगै बोर्डले तयारी अगाडि बढाएको छ । असोज १५ गतेभित्र परीक्षा सम्पन्न गर्ने योजना रहेको बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गाप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । उनले भने, &lsquo;कक्षा १२ को परीक्षा १५...
कक्षा १२ को परीक्षा असोजको पहिलो सातादेखि सुरु हुने
काठमाडौं - कक्षा १२ को परीक्षा असोज महिनाको पहिलो सातादेखि गरिने भएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई फैलिन नदिनकालागि सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन अन्त्य भएपछी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षा सञ्चालनको तालिका बनाउन लागेको हो । कोरोना १९ का कारण स्थगित कक्षा १२ को परीक्षा असोज महिनाको दोस्रो सातामा सक्ने गरी तालिका...
त्रिविका क्याम्पसहरु आजबाट खुले
काठमाडौं - त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका क्याम्पसहरु बुधबारबाट खुल्ने भएका छन् । साउन ६ गतेदेखि लकडाउन अन्त्य भएसँगै शिक्षक/कर्मचारीहरुको सार्वजनिक विदा पनि सकिएकाले साउन ७ गतेदेखि क्याम्पस तथा कार्यालयहरु सुचारु हुने त्रिविले जानकारी दिएको छ । क्याम्पसहरु खुले पनि विद्यार्थीहरुको नियमित पठनपाठन र पुस्तकालय सन्चालन भने नहुने त्रिवि रजिष्ट्रारको कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा...
निजी विद्यालयहरुले भोलीदेखि अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने
काठमाडौं - निजी विद्यालयहरुले भोलि साउन १ बाट अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् । प्याब्सन र एन&ndash;प्याब्सनले संयुक्त रुपमा वैकल्पिक शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप स्थगन गर्ने र शिक्षक तथा कर्मचारीलाई बेतलवी घर विदा दिने निर्णय गरेका हुन् । &lsquo;हामीसँग कक्षा सञ्चालन गर्ने सामर्थ्य रहेन&rsquo; प्याब्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरीले भने, &lsquo;जुन...
यस बर्ष कक्षा ११ को बोर्ड परीक्षा नलिने निर्णय
काठमाडौं -&nbsp; यस वर्ष कक्षा ११ को पनि बोर्ड परीक्षा नहुने भएको छ । यो परीक्षा वैशाख २१ गतेबाट गर्ने तय भएको थियो । तर कोरोना भाइरस (कोभिड&ndash;१९) को महामारीका कारण परीक्षा हुन सकेन । अब आन्तरिक मूल्यांकनबाट विद्यार्थीहरुलाई प्रमाणपत्र दिइनेछ । विद्यार्थीहरुको आन्तरिम मूल्यांकन कसरी गर्ने भनेर कार्यविधि बनाउने जिम्मा राष्ट्रिय...
त्रिविका परीक्षापनि रद्ध,एसईई कै जसरी आन्तरिक मूल्यांकनबाट नतिजा प्रकाशित गर्ने
काठमाडौं - त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सेमेस्टर प्रणालीका कुनैपनि परीक्षा नलिने भएको छ । एसईई परीक्षा नलिई आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा अंक दिएर नतिजा प्रकाशन गर्ने निर्णय जस्तै त्रिविका सबै सेमेस्टर प्रणालीका परीक्षाहरुपनि स्थगित गर्ने निर्णयमा त्रिवि पुगेको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले बार्षिक परीक्षा अन्र्तगतका परीक्षाका लागि भने अझै पर्खिने...
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा एसईईको नतिजा प्रकाशन कार्यविधि जारी
काठमाडौं&ndash; राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) कक्षा १० &lsquo;विद्यार्थी नतिजा, प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि, २०७७&rsquo; जारी गरेको छ । कोरोना महामारीका कारण स्थगित गत वर्षको एसईई परीक्षालाई सम्बन्धित विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई आधार बनाई नतिजा प्रकाशन गर्न बोर्डले सो कार्यविधि जारी गरेको हो । विद्यार्थीको अन्तिम मूल्याङ्कनका लागि सम्बन्धित प्रधानाध्यापकको...
शिक्षा मन्त्रालयले भन्यो- 'विद्यालय बन्द रहेको बेलाको शुल्क नलिनू'
काठमाडौं - शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय बन्द रहेको बेलाको शुल्क नलिन बोर्डिङ सञ्चालकहरूलाई आग्रह गरेको छ। गत आइतबार प्याब्सन र नेशनल प्याब्सनले संयुक्त रूपमा अपिल जारी गर्दै शुल्क तिर्न विद्यार्थीका अभिभावकलाई आग्रह गरेका थिए। उक्त अपिलमाथि शिक्षा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले विज्ञप्ति निकालेका हुन्।गत...
लकडाउनका कारण व्यवसाय प्रभावित भएको भन्दै घरभाडा छुटका लागि इक्यानको अपिल
काठमाडौं - कोरोनाभाइरसको महामारीले फागुन यता व्यवसाय प्रभावित भएको भन्दै नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई अतिप्रभावित सूचीमा राख्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग माग गरेको छ । बन्दाबन्दी शुरु भएदेखि नै कार्यालय सञ्चालन गर्ने अवस्था नै नभएकाले घरभाडा छुटका लागि घरबेटीसँग इक्यानले अपिल गरेको छ। बन्दाबन्दी केही...